INorvald - Ifama eBirsay eneendawo ezintle onokuzibona - I-Airbnb
INorvald - Ifama eBirsay eneendawo ezintle onokuzibona
I-Norvald, ekwindawo efanelekileyo yeholide epholileyo. Le ndlu ime kwinduli enembonakalo entle yolwandle kunye namaphandle asemaphandleni. Le ndlu inamagumbi okulala ayi-3, igumbi lokuhlala elineesofa eziyi-3 ezitofotofo, indawo yokutyela eneendawo ezintle nekhitshi elinento yonke. Amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela eliphambili liphantsi, kunye neendawo zokuhlala eziphambili kunye neWC phezulu, ezenza kube mnandi ukubona iindawo ezintle.
Sinepakethi yokwamkela iindwendwe enobisi, isonka, ibhotolo, itshizi, ioatcakes, iibhiskithi, iti, ikofu kunye neswekile.
Sinokubonelela ngebhedi yokuhamba, amasango ezitepsi, isitulo esiphakamileyo kunye nebhafu yosana simahla ukuba kuyimfuneko.
Amagumbi okulala aneebhedi ezilandelayo: Igumbi lokulala elinye lineebhedi ezimbini
Igumbi lokulala amabini anebhedi elala abantu ababini enye
Igumbi lokulala lesithathu linebhedi enkulu eyi-1
Kukho umbane, wamkela iimali eziyi-1 kuphela. Kwiinyanga zasehlotyeni, umyinge wokusetyenziswa yi-15/ngeveki. Ndinemali eninzi ukuba ufuna ukutshintsha.
Sihamba malunga nemizuzu eyi-15 ukusuka elunxwemeni oluhle kunye nemizuzu eyi-20 ukusuka kwilali yePalace, apho ungathenga khona imveliso yasekuhlaleni kwivenkile okanye undwendwele iBirsay Bay erearoom enconyelwa kakhulu ukuze ufumane ukutya okumnandi kwasekhaya. Uhamba nje imizuzu eyi-5 ukusuka endlwini uza kufumana indawo yokudlala entle kakhulu ibe kancinci endleleni ungatyelela iBarony Kaen, indawo enamanzi asebenzayo eOrkney.. Iindawo zembali ezifana neSkara Brae, iMaeshowe, iRing of Brodgar kunye neNess of Brodgar zonke zikumgama wemizuzu eyi-15 xa uhamba ngemoto.
Umnyango uza kushiywa uvulelwe izitshixo ezishiywe ngaphakathi endlini. Ndiza kukuthumelela imiyalelo yekhaya ngeimeyile ngaphambi kokuba ufike ndize ndishiye ikopi endlwini. Nceda ufowune okanye uthumele i-imeyile nanini na ukuba unengxaki okanye imibuzo. Ndikufuphi kwimizuzu eyi-5 kuphela.
Umnyango uza kushiywa uvulelwe izitshixo ezishiywe ngaphakathi endlini. Ndiza kukuthumelela imiyalelo yekhaya ngeimeyile ngaphambi kokuba ufike ndize ndishiye ikopi endlwini. Nceda…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Birsay